Accent Accelerator: Gadzirisa Kutengesa uye Kushambadzira Zvishandiso | Martech Zone
Muvhuro, June 16, 2014 Douglas Karr
Maererano Aberdeen Boka, makambani anonyanya kutungamira mukurera anounza makumi mashanu kubva muzana% yekutengesa yakagadzirira inotungamira ku50% yakaderera mutengo. Nezviri mukati senge zano, zvakanyanya se 50% yemakunda ako matsva inogona kuuya kubva kune yakare, inokurudzirwa inotungamira. Aya matanho anoshamisa uye anonongedzera kuchinhu chimwe chete… ita kuti ruzivo ruwanikwe nyore nyore kune vateereri vako pavanoruda, uye iwe unowedzera zvakanyanya mikana yako yekutungamira mutungamiri kuva mutengi.
Accent Accelerator inzvimbo yekutengesa yekubatsira kubatsira masangano ekutengesa nemasangano ekushambadzira kubata, kuenzanisa uye kubatanidza yavo yekutengesa uye yekushambadzira zvinhu. Iyo chikuva chakabatanidzwa neCRM yekambani uye inobvumidza yako timu yekutengesa kuenzanisa tarisiro nezvirimo zvavanenge vachida, uye kununura uye kuyera zvazvinoita.
Accent Accelerator mabhenefiti uye maficha ekutengesa
Tsvaga zvekushandisa uye zviwanikwa zvinoenderana nemamiriro ekutengesa kubva kune chero chishandiso.
Shanda mukati meCRM yako uye nzira yekutengesa ichitarisa zviwanikwa sezvazvinodiwa.
Shandisa mazano ekurairidza, nyaya yenyanzvi zano, tsvagurudzo yakakodzera uye zvinhu zvekubatana nezvikwata zvekutenga.
Vaka zvimiro zvetsika nemagwaro ekuburitsa kunzwisisa uye kusiyanisa kukosha kwako.
Coordinate sales team chiitiko uye batana pamwe nenyaya dzenyanzvi.
Goverana zvinhu uye ruzivo uye uteedzere kutenga kwechikwata kufarira kubva pane zvehunhu mhinduro.
Accent Accelerator inobatsira uye maficha ekushambadzira
Chengetedza uye uvandudze zviwanikwa zvekutengesa zvinobudirira uchishandisa masimba ekugona.
Kurudzira zvemukati mashandisirwo nemishandirapamwe yekuzivisa uye kuratidzira masosi.
Gadzira uye gadzirisa runyorwa runyanzvi uye zvekudzidzisa zvikamu zvinopa simba kutengesa nehungwaru zvichibva pamamiriro
Tora mhinduro yakananga kubva kunhengo dzevatengesi nezve zvinobudirira zvemukati.
Gadzira uye chengetedza magwaro ane simba anogona kugadzirwa nekutengesa kune mamwe mamiriro.
Wana kuoneka kwakazara mune izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa uye zvinonyanya kufarirwa nekutengesa.
Tags: madhimoni akisheniCRMMarketingzvekushambadzira zvinhukutengesa uye kushambadzirazvinyorwa zvekutengesaKugonesa Kugonesazvinhu zvekutengesa